Breaking:WHO काे यो कुराले विश्वमा झन् फैलायो डर।कोरोनाबारे यस्तो सत्यता बाहिरियो। – Life Nepali
Breaking:WHO काे यो कुराले विश्वमा झन् फैलायो डर।कोरोनाबारे यस्तो सत्यता बाहिरियो।
विश्वमा हरेक १० मा एकजना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने डब्ल्युएचओले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । विश्वभर तीन करोड ५६ लाख मानिस संक्रमित भएको पुष्टि भए पनि यो संख्या ८० करोड नजिक रहेको डब्ल्युएचओको अनुमान छ ।
विज्ञहरुले यसअघिदेखि नै लगातार वास्तविक संक्रमितको संख्या पुष्टि भएको भन्दा धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् । थपिए २ लाख ६४ हजार संक्रमित।विश्वभर पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ६४ हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
Previous Breaking news : कोरोनालाइ लिएर फेरि एकपटक WHO ले गर्यो यस्तो डरलाग्दो खुलासा !
Next बैंकमा पैसा निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार, २ मिनेट समय दिएर एकपटक यो अवश्य पढ्नुस !